Ahoana ny fomba hamakian'ny iOS 7 ny bokintsika ho azy?: VoiceOver | Vaovao IPhone
Mazava fa tsy misy mpampiasa ny fotoana tadiaviny eo alohan'ny iPad na fitaovana hafa: iPhones, iPads, PSPs, Plays, Wiis ... Manana zavatra manan-danja kokoa isika noho ny mandany "tontolo tolakandro "eo alohan'ny fitaovana elektronika toy ny: miasa, mikarakara ny biby fiompinay, ny zanakay, manamboatra sakafo ... Ireo asa rehetra ireo dia manakana anay tsy handany ny fotoana tadiavinay eo alohan'ireo fitaovana ireo. Anio dia hasehonay fitaovana iray ianao mba hahafahan'ny mpitia boky mampiasa iBooks hihaino fa tsy hamaky irery ireo boky tadiavin'izy ireo hampiasa ilay fitaovana VoiceOver izay tonga amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fitaovana iOS. Te hahafantatra ireo fitaovana hamaky irery ireo bokinay ireo ve ianao? Eo alohan'izay!
1 VoiceOver: Ahoana ny fomba hampiasana azy?
2 Mampiasa VoiceOver ao amin'ny iBooks
VoiceOver: Ahoana ny fomba hampiasana azy?
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mampihetsika ny VoiceOver, ho an'ireo izay tsy mahalala hoe inona ity fitaovana ity:
VoiceOver dia fitaovana hita amin'ny fitaovantsika (iOS) izay asany dia ny miteny mafy ireo zavatra tadiavintsika, toy ny amin'ity boky ity.
Mba hanaovana izany:
Access the Fikirana ny fitaovantsika ary avy eo ao General
Rehefa ao amin'ny «General»Tsindrio ny«Accessibility»Ary mitady ny takelaka«VoiceOver«
Alefaso ilay safidy VoiceOver ary hitantsika fa manana zavatra sasantsasany azontsika ovaina toa isika
Vakio ny lalana
Raha vantany vao navadika ny VoiceOver dia tsy maintsy jerenao ny fikirakirana ny fitaovana:
Raha manindry isika indray mandeha amin'ny singa sasany dia hamaky antsika izay voafantina
Raha manindry isika indroa hampavitrika ny entana voafantina izahay
tsary rantsan-telo telo hidina amin'ny alàlan'ny menus
Mampiasa VoiceOver ao amin'ny iBooks
Raha irintsika izany VoiceOver vakio ny bokintsika dia mila tratrantsika fotsiny (ary hoy aho hoe mahatratra satria sarotra be) ny manatona ilay boky tadiavintsika ao amin'ny fampiharana iBooks.
Rehefa tafiditra tao anaty boky, mila tsindrio indroa ao amin'ny fehintsoratra isika Tianay ny hamaky ny VoiceOver, ary avy eo soloino amin'ny rantsantanana roa ny VoiceOver hanombohana ny asany.
Fampahalalana bebe kokoa - Apple dia mifidy mpanamboatra vaovao roa ho an'ny iDevices, ankoatran'i Foxconn
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hamakiana ny bokintsika iOS 7 ho azy: VoiceOver
Mampiasa azy isan'andro aho, misaotra ny namana iray izay nampianatra azy ahy. Torohevitra roa:
Ampifanaraho aloha ny bokotra Home raha manindry in-3 ianao dia ampandehanana ilay feo (mba hahafahanao mankany amin'ny boky tsy misy olana ary avy eo hampavitrika azy)
Faharoa, raha tianao ny hamakiako ny pejy hatrany am-piandohana dia atsofohy hatrany ny rantsan-tànanao. Tsy maninona izay lalaovinao dia manomboka hatrany am-boalohany ary mitohy mandra-panajanonao azy.
Salama!! Ampiasaiko be dia be izany hamakiana boky. Ny olana dia rehefa tiako ny hamakiana ahy amin'ny fiteny hafa ny lahatsoratra iBook. Rehefa nila izany aho dia tsy maintsy nanova ny fitenin-telefaona ary avy eo dia hitako ny fomba hanampiana fiteny hafa. Imbetsaka aho no nilalao tsy nahy ary nivadika ho anglisy ihany. Hitako fa rehefa tsy nahy izany, ny fanovana rantsantanana ambony dia nanova ny fiteny iray tamin'ny iray hafa indray. Ny olana dia tsy hitako izay hatao raha hanova ny fiteny fanahy iniana. 🙁
Elias Limneos dia mampiseho amintsika SBRotator sy CallBar mandeha amin'ny jailbreak iOS 7